Tram fiaran-tsolikolom-bary mitobaka any Kayseri RayHaber
HomeTORKIACentral Anatolia38 KayseriTram-basy fitobolam-bidy mitobaka any amin'ny Kayseri
08 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 38 Kayseri, Central Anatolia, TENDER RESULTS, Auctions, Railway, ANKAPOBENY, KENTİÇİ Rail Systems, Headline, TORKIA, tram 0
tram fiantsonan'ny fiara fitaterana fihenam-bidy mitobaka toerana maharesy ny orinasa
Vavam-pitondran-tena no namboarin'ny Kayseri Metropolitan Municipality ho an'ny fanofana trano amin'ny dokam-barotra amin'ny tsangambato amam-bokatra sy ny turnstiles ary ny fiara fitaterana sy ny fiara fitaterana amin'ny làlan-dalamby lalamby ho an'ny taona 6.
Vavam-pitondran-tena no namboarin'ny Kayseri Metropolitan Municipality ho an'ny fanofana trano amin'ny dokam-barotra amin'ny tsangambato amam-bokatra sy ny turnstiles ary ny fiara fitaterana sy ny fiara fitaterana amin'ny làlan-dalamby lalamby ho an'ny taona 6. Orinasa fito no nandray anjara tao anaty kiraro.
Eo ambany fitarihan'ny sekretera jeneralin'ny solombavambahoaka Metropolitan Ahmet Darendelioğlu, takelaka dokambarotra 642 amin'ny fiara fitaterana lakana, takelaka dokambarotra 233 amin'ny bisy, takelaka dokambarotra 1200 amin'ny polesaly katenika eo amin'ny tsipika lalamby lalamby ary ny faritra fanaovana dokambarotra varotra 327 an'arivony any amin'ny gara. Nisy volavola iray natao ho an'ny bileta 2. Tamin'ny fakana aina dia voaray aloha ny baiko an-tsoratry ny orinasa mpandray anjara fito ary avy eo natao ny lavanty.
Ireo mpanolotsitra ireo dia nanolotra ireto tolotra an-tsoratra ireto:
1-Reklam ivelan'ny: 355 arivo TL
2-Digiplus: 460 arivo TL
Fahazavana 3-Tanàna: 470 arivo TL
4-Ar Anadolu Advert: 455 arivo TL
5-Seyfettin Kalaycıgil: 475 arivo TL
6-Media Media: 750 arivo TL
7-Sole Famaritana: 801 arivo TL
Taorian'ny fisokafan'ireo baiko voasoratra, ny tolotra ambony indrindra dia nomena ny lavanty an'ireo orinasa. Ny tolotra ambony indrindra amin'ny lavanty dia 910 arivo TL miaraka amin'ny Sole Promotion Advertising Agency.
Ny filohan'ny vaomiera momba ny Tender Ahmet Darendelioğlu, dia hatao isan-taona ny fangatahana ary hampiakatra ny vidim-piainana isan-taona ny firaisam-bolan'ny alàlan'ny fihenan-kevitra arahin'antoka, ny tolo-kevitra nampitain'ny vaomiera taorian'ny fizahana ny foto-kevitra nambara.
Fampitandremana momba ny tolotra 18 / 08 / 2014 TRAMBUS Stop sy Turnstiles Area Top Manarona Yaptırılacaktır dia kaominina Malatya ny fanohanana an'ny Departemanta TRAMBUS Stop sy Turnstiles Area Top Manarona Yaptırılacaktır dia omena amin'ny alalan'ny misokatra fitiavana ny asa fanorenana 4734 No. 19 Article ao amin'ny bahoaka manampahaizana filana lalàna. Ny fampahafantarana amin'ny antsipiriany momba ny fanolorana dia omena etsy ambany. Fanahy Registration Number: 2014 / 94651 1-Fitantanan-draharaha a) Address: İnönü Quarter İnönü Caddesi 182 44080 YEŞİLYURT / Malatya b) an-telefaonina sy fax maro: 4223771396 - 4223771392 c) E-mail: destekhizmetleri@malatya.bel.t dia telo) fitiavana antontan-taratasy 2-ny lohahevitry ny tender a) inin
TCDD Toprakkale - tetikasa fakana amam-bozaka vita amin'ny lakandranon'i Double Line 23 / 08 / 2012 Ny fanombanana ny fangatahana amin'ny fanadihadiana ny serivisitry ny serivisy manara-dalamby, tetik'asa, tetik'asa momba ny seraseram-pifaneraserana sy ny serivisy "ao anatin'ny faritry ny Tetikasa mikasika ny tetikasam-pirenen'ny fanjakana ao atsimo atsinanan'i Anatolia (GAP)" dia efa vita. Araka ny vaovao voaray avy amin'ny Investments Magazine; Ny SWS Engineering dia nahazo ny fifanarahana tamin'ny fanolorana ny 1.568.109 lira. Azafady tsindrio raha mila vaovao bebe kokoa: Source: Investments
Halkalı - Çerkezköy Ny fifanekena dia nanao sonia niaraka tamin'ny orinasa nahazo ny lahateny ho an'ny tetikasa fanelezana ny toerana 02 / 01 / 2014 TCDD Halkalı - Çerkezköy Tetikasam-pifandraisan-davitra eo anelanelan'ny toeram-pivarotana Nisy fifanekena natao tamin'ny E + M - Aykon Elektrik izay nahazo ny fifanarahana.Halkalı - Çerkezköy Fanamafisana ny toeram-piasana eo anelanelan'ny tetikasa Station. Araka ny vaovao voaray avy amin'ny Investments Magazine; Ny fifanekena dia nanao sonia ny 27 December 2013 sy 25.397.164 lira miaraka amin'ny orinasa E + M - Aykon Elektrik izay nahazo ny fifanarahana. Araka ny fantatra, Ultra Teknoloji dia nahazo ny fanolorana ny tolotra 16.468.000 lira. E + M - Ny orinasan-tserasera Aykon Elektrik dia homena noho ny valin'ny 31 Jolay 2013
Nurdağ - Başpınar mpandresy amin'ny tetikasa New Railway Tender 02 / 01 / 2017 15 Tamin'ny Avrily 2016, nambara ny fangatahana ny lalam-pandeha vaovao eo anelanelan'i Nurdağ Başpınar. Ny Faras Construction + Öztaş Construction Joint Venture dia nahazo ny laharana 525.4 amin'ny tendron'ny 7 tapitrisa TL noho ny fampisehoana ny lalambe vaovao eo anelanelan'i Nurdağ Başpınar. Ny fangatahana fananganana ny lalambe vaovao eo anelanelan'ny toby Nurdağ Başpınar sy ny vidin'ny 2015 / 179518 GCC an'ny orinasan-dalamby Tiorka dia natao tamin'ny Aprily 927.794.559.87. Ireo mpihetsiketsehana sy ny bitsiny (TL) dia toy izao manaraka izao: 15-Senbay 2016 1-Tarmac Aggregate - Investment Yapas AS Joint Venture 478.665.489,80 2-Didoray - Demet ...
Konya-Karaman Stations Nanambara ny fanitarana ny fanamafisana ny orinasam-barotra 26 / 01 / 2017 Konya-Karaman anelanelan'ny Stations ny Making fanahy ny fanitarana Fandresena Companies manokana Nanana 29 Septambra 2016 fanatitra voangona any amin'ny Repoblikan'i Torkia State lalamby (TCDD) General Tale ny 2016 / 271491 JCC maro izay 51.658.672 tokotokony saran'ny "Ny fanaovana ny fanitarana tetikasa ny Konya-Karaman anelanelan'ny Stations" fitiavana, ny 37.924.603 Onh Construction - Nandresy tamin'ny tolotra TL i Hca Construction. Rehefa tapitra ny fizotran-dalàna dia hisy fifanarahana nosoniavina miaraka amin'ilay orinasa. Ny orinasa 10 dia nandefa ny volavolan-dalàna ho an'ny fanitarana ny fiantsonan'ny Konya sy Karaman.
Fampitandremana momba ny tolotra
TCDD Toprakkale - tetikasa fakana amam-bozaka vita amin'ny lakandranon'i Double Line
Halkalı - Çerkezköy Ny fifanekena dia nanao sonia niaraka tamin'ny orinasa nahazo ny lahateny ho an'ny tetikasa fanelezana ny toerana
Nurdağ - Başpınar mpandresy amin'ny tetikasa New Railway Tender
Konya-Karaman Stations Nanambara ny fanitarana ny fanamafisana ny orinasam-barotra
Mansion sy Karşıyaka Ny mpandresy amin'ny Tram Project dia asaina amin'ny fifanarahana
Mansion sy Karşıyaka Ny mpandresy amin'ny Tram Project dia nasaina hiditra amin'ny fifanarahana
Tendrombohitra avy any Kayseri teny amin'ny làlana mankany amin'ny Erciyes Summit
Nanao fihetsiketsehana ireo olom-pirenen'i Kayseri
1.500 bogie novokarin'ny Railtur avy amin'i Kayseri amin'ny rindrina Eoropeana